Recycling osisi: àgwà, mkpofu iga na ọgwụgwọ | Green Renewables
Osisi imegharị ihe
Dị ka anyị niile maara, imegharị ihe bụ usoro ịtụgharị ihe mkpofu na nsị ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ ka ọ ghara ịdị mkpa iji ihe ọhụrụ eme ihe mgbe a na-ewu ma na-emepụta ha. Iji mee usoro nhazigharị a nke ọma, a ga-ebuga ihe mkpofu ahụ gaa n'ụlọ nkwakọba ihe pụrụ iche maka mgbanwe ya, nke ga-enwerịrị njirimara dị iche iche, ma ọ bụ n'ihe gbasara ígwè ọrụ zuru oke na ndị ọrụ ruru eru, ma ọ bụ n'usoro nhazi. . N'ihi na nke a bụ osisi imegharị ihe.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịmegharị ihe ọkụkụ, àgwà ha na mkpa ha.
1 Usoro mbufe mkpofu
2 Nzọụkwụ na-emegharị ihe ọkụkụ
3 Usoro nhazi na mbufe mkpofu
3.1 Imebi ọgwụgwọ
4 Akụkụ nke ihe eji emegharị ihe
Usoro mbufe mkpofu
Site na gwongworo gaa n'ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri, ihe mkpofu ga-agafe usoro dị iche iche, nke a ga-emerịrị na usoro dị iche iche nke ha na-enye, yana ndị ọrụ na igwe dị mkpa, n'agbanyeghị ebe ha si malite.
Nyere njirimara nke ụdị ihe mkpofu dị iche iche, lụlọ nkwakọba ihe ga-agbanwerịrị maka ụdị ihe mkpofu ọ bụla, ya mere anyị nwere ike kewaa ha site na otu echiche ndị a.
Osisi ahụ ga-enwerịrị usoro sara mbara zuru oke iji nwee ike ịhọrọ na ịhazi mkpofu siri ike nke ime obodo (MSW) n'ụdị dị iche iche, ma ọ bụ organic ma ọ bụ inorganic, maka nhazi ikpeazụ nke dị elu.
N'ihi nke a, a ghaghị imezi igwe eji eme ihe maka ụdị usoro a n'ụzọ zuru ezu iji mee ya, yana ndị ọrụ na-arụ ọrụ igwe ma ọ bụ ndị na-etinye ebe na usoro nkewa ihe mkpofu. Ndị ọrụ ga-enwerịrị ọ bụghị naanị ịdị mma dị elu, mana ha ga-enwerịrị akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka nhazi nke na-eme ka nchekwa na nchekwa ha na-arụ ọrụ.
Banyere usoro, ụlọ nkwakọba ihe ga-adị obosara ka e wee nwee ike ịmegharị usoro nrụgharị dị iche iche na ya. Tụkwasị na nke ahụ, ha ga-anọgide na-enwe ezigbo ventilashion na ezigbo ọkụ.
Nzọụkwụ na-emegharị ihe ọkụkụ
E kewara ebe mkpofu ụzọ abụọ: ụlọ ma ọ bụ azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ bụ njikọ nke mbụ n'agbụ a na-emegharị ihe ma bụrụ ebe a na-emepụta ihe mkpofu. Ebe mmepụta ụlọ bụ ebe obibi nke onwe; azụmahịa, ụlọ ahịa, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ahịa izugbe; na ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na azụmahịa. Enwere ike ikewapụ ihe mkpofu a na-emepụta n'ebe ndị a ma megharịa ya site na n'ụdị dị iche iche eji emegharị ihe.
N'ihe gbasara ụlọ ọrụ, site na ịbanye nkwekọrịta na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka njikwa mkpofu. Ịgbaso usoro a dị mkpa iji zere ịgbaji agbụ.
Nzọụkwụ nke abụọ n'agbụ a na-emegharị ihe bụ imegharị ihe mkpofu. Ọ na-agụnye ịnakọta na ibufe ihe mkpofu na arịa ndị kwekọrọ. Enwere igwe, plastik ma ọ bụ ígwè, ihe ruru 40 cubic mita, compactors, shredders akwụkwọ na ọtụtụ ígwè ọrụ na-etinye aka na usoro ahụ.
Usoro nhazi na mbufe mkpofu
Njikọ a anaghị adị mgbe niile na agbụ. Nke a bụ ụlọ ọrụ na-anakọta ihe mkpofu iji nakọta dị ka o kwere mee ma jiri ohere njem na-eme njem n'ụzọ na-abaghị uru. Ihe atụ bụ ụlọ ọrụ nhazi akwụkwọ na kaadiboodu. Ha na-anakọta ụdị ihe a niile, pịa ya na bọket buru ibu, wee buru ya gaa ebe ọzọ site n'ebe ahụ. Nke a na-enyere aka ibelata ụgwọ njem.
Ọ bụ isi ihe dị na usoro nrụgharịgharị. Ọ bụ na nzọụkwụ a ka a na-ekewapụ ihe mkpofu na nkewa. nke mere na ihe niile dị n'otu, tinye ọnụ n'ìgwè ma nwee ike ibuga ya iche. Ya mere, a na-akwalite ọrụ nke ụlọ ọrụ nhazi na imegharị ihe.
Oge ikpeazụ nke agbụrụ dị anya a bụ mkpofu mkpofu. Enwere ụlọ ọrụ dị iche iche na-eji teknụzụ dị iche iche na-edozi ihe mkpofu. Ha nwere ike ịbụ ebe a na-emegharị ihe (akwụkwọ na kaadiboodu, plastik, metal, wood, glass…), sedimenti a na-achịkwa (nke a na-akpọkarị landfills) ma ọ bụ osisi na-emepụta ike (biomass, biogas, incinerators…).
Na mgbakwunye na nkebi ise a, ihe dị iche iche nwere ike ịme usoro dị iche iche dabere na njirimara ha. Mgbe emechara, a na-akpọlite ​​ihe ndị bụbu ihe mkpofu. Ha na-aghọ ihe ọhụrụ. Nwa amaala nwere ikike na-ekewa ma na-echekwa ihe mkpofu n'ụzọ ziri ezi. Enwere ọtụtụ uru gụnyere ibelata ọnụ ọgụgụ mkpofu ahịhịa, ibelata ikuku carbon dioxide, ichekwa mmiri na ume, na imepụta ọrụ na-adịgide adịgide.
Akụkụ nke ihe eji emegharị ihe
Iji mee usoro a nke ọma na ụlọ ọrụ a na-emegharị ihe, a ga-ebufe ihe mkpofu ahụ n'ụlọ nkwakọba ihe maka ime mgbanwe. Ndị a ga-enwerịrị usoro njirimara zuru oke, gụnyere igwe zuru oke na ndị ọrụ ruru eru dabara maka ụgbọ mmiri n'onwe ya.
Ọ dị ezigbo mkpa ịghọta usoro site na gwongworo gaa na hanga ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na-ebutu igwe. Site n'ebe ahụ, ihe mkpofu ga-agafe usoro nke usoro. nke a ga-emegharị na usoro dị iche iche nke ihe mkpofu ga-esi na-agafe, yana ndị ọrụ na igwe ndị metụtara ya, n'agbanyeghị ebe ha si.
N'ihi njirimara nke ụdị ihe mkpofu dị iche iche, ụlọ nkwakọba ihe ga-edobe ụdị ihe mkpofu ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike nkewa site n'otu echiche. Osisi ahụ ga-enwerịrị usoro obosara zuru oke iji kwe ka ọkwa dị iche iche nke nhọrọ na nhazi nke mkpofu siri ike nke obodo mepere emepe (MSW). Ihe mkpofu ahịhịa ga-enwe ike ịmepụta compost ikpeazụ dị elu.
Ya mere, igwe eji eme ihe maka ụdị usoro a ga-adịrịrị n'ọnọdụ zuru oke na a ga-edozi ya nke ọma iji mezuo usoro ahụ nke ọma. N'otu aka ahụ, ndị ọrụ na-ahụ maka igwe ndị a ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ na usoro nkewa ihe mkpofu ga-adịkwa njikere.
Ọ bụghị naanị na ndị ọrụ ga-abụ ndị tozuru oke, mana ha ga-enwerịrị akụrụngwa kwesịrị ekwesị. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike mejuputa ọrụ ndị ị ga-emerịrị iji hụ na nchekwa na nchekwa zuru oke na-arụ ọrụ. N'ihe gbasara nhazi, ụlọ nkwakọba ihe ga-adị obosara. nke dị mkpa ka e wee nwee ike ịmegharị usoro ntụgharị dị iche iche na ya. Tụkwasị na nke ahụ, ha ga-anọgide na-enwe ezigbo ventilashion na ezigbo ọkụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe ọkụkụ na-emegharị ihe na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Osisi imegharị ihe
Kedu ihe eji eri nri